ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုန်တင်သင်္ဘောကြီး "Ever Ace" သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်း၌ ဆိုက်ကပ် - Xinhua News Agency
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုန်တင်သင်္ဘောကြီး "Ever Ace" သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်း၌ ဆိုက်ကပ်
ကိုလံဘို ၊ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုန်တင်သင်္ဘောကြီး “Ever Ace” သည် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်က သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်း၌ ဆိုက်ကပ်ခဲ့ကြောင်း သီရိလင်္ကာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့(SLPA) က ဆိုသည်။အလျားပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာ (TEUs) အလုံးပေါင်း ၁,၆၀၀ တင်ဆောင်ထားသော ၎င်း သင်္ဘောကြီးသည် ဆိပ်ကမ်း၏ ကိုလံဘိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်တိန်နာစင်္ကြံ(CICT) ၌ ဆိုက်ကပ်ခဲ့ကြောင်း SLPA တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက် အရသိရသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်း၌ ဆိုက်ကပ်ထားသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုန်တင်သင်္ဘောကြီး “Ever Ace” အား အောက်တိုဘာ ၆ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပနားမားအလံလွှင့်ထူထားသော ယင်းသင်္ဘောကြီးသည် အလျား ၄၀၀ မီတာကျော်ရှိသည်။ ၎င်း၏ အလေးချိန်မှာ တန်၂၃၅,၀၀၀ ကျော်ရှိကာ TEUs အလုံးပေါင်း ၂၃,၉၉၂ လုံး တင်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဧရာမသင်္ဘောကြီး ဆိုက်ကပ်နိုင်သော ဆိပ်ကမ်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၂၄ ခုသာ ရှိပြီး ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းသည် တောင်အာရှဒေသတွင် တစ်ခုတည်းသော ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ကြောင်း SLPA က ဆိုသည်။ ဆိပ်ကမ်းရေအနက် ၁၈ မီတာရှိသော ကိုလံဘိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်တိန်နာစင်္ကြံ(CICT)သည် ဧရာမ ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးများ ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့် တောင်အာရှဒေသ၏ ပထမဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ရေဘောင်ဖြစ်သည်။
ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်း၌ လက်ရှိတွင် ကွန်တိန်နာအတင်အချ စင်္ကြံရေဘောင် သုံးခု ရှိရာ Jaya container terminal (JCT) ရေဘောင်ကို သီရိလင်္ကာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့(SLPA) က လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေပြီး ၊ တောင်အာရှဂိတ်ဝ စင်္ကြံရေဘောင်(SAGT ) နှင့် (CICT) စင်္ကြံရေဘောင်ကိုမူ တရုတ်ကုန်သည်များဆိပ်ကမ်းက လုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲ လည်ပတ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တောင်အာရှဒေသတွင် တစ်ခုတည်းသော ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ကွန်တိန်နာစင်္ကြံရေဘောင်ဖြစ်သည့် CICT သည် ၎င်းအား စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ကမ္ဘာ့သင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းအား အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍဖြစ်လာရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
COLOMBO, Oct.7(Xinhua) — The world’s largest container vessel “Ever Ace” arrived at the Colombo Port in the Sri Lankan capital late on Tuesday, the Sri Lanka Ports Authority (SLPA) said.
The vessel sailing under the flag of Panama is some 400 meters in length. It weighs about 235,000 tons and can carry 23,992 TEUs
(1,2) -Photo taken on Oct. 6, 2021 shows the world’s largest container vessel “Ever Ace” at the Colombo Port in the Sri Lankan capital. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)